Qaxooti cusub oo Rohingya ah oo ku qulqulaya dalka Indonesia – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaQaxooti cusub oo Rohingya ah oo ku qulqulaya dalka Indonesia
Hiiraan Xog, Apr 20, 2018:- Saraakiisha dalka Indonesia ayaa sheegay in ku dhawaad 80 qof oo qaxootiga qowmiyada Rohinja ah ee kasoo jeeda dalka Myanmar ay haatan doomo kus gaareen gobolka Sumatra ee waqooyi galbeed dalkaasi.
Qaxootigan ayaa qeyb ka ah dadka tirada badan ee ilaa iyo haatan sanadkaan kusoo gaaraya safaro dhaadheer oo qatar ah dalka Indonesia, maadaama ay wali socoto qulqulka qaxootiga Rohinja ee naftooda kala soo carararya Myanmar.
Dadkaan qaxootiga ah oo ay ka mid yihiin sideed caruur ah ayaa rag kaluumeysato ah waxa ay ku caawiyeen inay kusoo galaan doomo dalka Indonesia.
Lixdii sano ee lasoo dhaafay, tobanaan kun oo qaxooti qowmiyada Rohinja ah ayaa kasoo baxsanayay tacadiyada loogu geysto gudaha dalka Myanmar iyaga oo doomo liita kusoo gaarayay dalkaasi.
Dalka Indonesia oo dadkiisu ay inta badan yihiin muslimiin ayaa marwalba qaabila qaxootiga Rohinja, inkasta oo qaxootigaasi lagu qasbo inta badan inay ku noolaadaan xerooyinka qaxootiga loogu talagalay iyo xarumo lagu haayo.
Dhanka kale, dolwadda Myanmar ayaa horey u sheegtay in ay dalkeeda dib ugu celisay qoysaskii ugu horreeyay ee ka tirsan Muslimiinta qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Rohingya, kuwaasi oo saandkii hore u qaxay dalka Bangladesh.